Faallo: Mudaharaadkii, doodii iyo go’aankii baarlamaanka | Somaliska
Waxaan maqaalkaan ku lafaguri doonaa doodii baarlamaanka Iswiidhan uu 4-ta bisha may, 2011-ka ka yeeshay arimaha dadka ajaaniibta ah iyo weliba saameynta uu yeeshay mudaaharaadkii ay soomaalidu ka sameeyeen banaanka baarlamaanka. Waxaan kaloo halkaan aan ku sharaxi doonaa waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee ay xisbiyadu ka yiraahdeen arinka middaynta qoysaska soomaaliyeed ee kala maqan. Mudaaharaadkii soomaalida reer Sweden Soomaalida ku dhaqan wadankan Iswiidhan ayaa waxaa ay aad ula socdaan sharciyada adag ee dowlada Iswiidhan ku soo rogtey dadka soomaaliyeed ee doonaaya iney ehelkooda (caruur, ama xaasaska kala maqan) la midoobaan. Hayàda socdaalku waxaa ay shuruud ka dhigtay in dadka doonaya iney ehelkooda iswiidhan jooga u yimaadaan ay ugu horeyn la yimaadaan teesare ama baasaboor soomaali ah. Shuruudaasi waxaa ay noqotay mid aad ugu adag dadka soomaaliyeed maadaama aaney soomaaliya ka jirin dowlad bixisa aqoonsi iyo baasaboor aduunka laga aqoonsan yahay. Haddaba guud ahaan soomaalida Iswiidhan ayaa waxaa ay sameeyeen dadaalo kala duwan oo dowlada lagu wacji gelinaayo in arinka soomaalida dib loo eego. Qof kasta oo soomaali ah ee Sweden jooga, dareemayana masuuliyad soomaalinimo waxaa uu qayb ka qaatay u dooditaanka dadka ay shuruudahani saameeyeen. Waxaa jira dad qoraalo sameeyey, kuwo xiriiro kala duwan la sameeyey dowlada, iyo kuwo shicibka Iswiidhan u sharaxay in shuruuda soomaalida la saaray ay tahay mid aan la fulin karin.Haddaba si umuurtaan si wadajir ah looga hortago waxaa ay ururada soomaliyeed isku raaceen in cudud wadajir ah la muujiyo. Iyadoo la kaashanaayo halku dhigi soomaaliyeed ee ahaa ”GACMO WADAJIR BEY WAX KU GOOYAAN” Mudaaharaadkii 4-ta may 2011 waxaa ka qayb qaatay ururo badan oo soomaaliyeed oo ku sugan Iswiidhan. Waxaa qabanqaabada hormuud u ahaa ururka middaynta soomaaliyeed ee afka Iswiidhishka lagu yiraa: Somaliska Riksförbundet (SRFS). Waxaa dadka soomaaliyeed ka yimaadeen dhamaan inta badan gobolada Iswiidhan. Ujeedaduna waxaa ay ahayd iney dowlada iyo baarlmaanka Iswiidhan u muujiyaan sida ay uga xun yihiin shuruudaha lagu soo rogey iyo dhibaatada ay leedahay kala maqnaanshaha ilmaha iyo waalidkood. Waxaa aad loo soo buuxiyey banaanka hore ee baarlmaanka Sweden. Dadka gobolada Iswiidhan ka yimid waxaa ay ku yimaadeen Basas waayeen oo ay soo kireysteen. Dadka meelaha Stockholm u dhow degana waxaa ay ku yimaadeen tareeno, baabuur ama lug. Dadku waxaa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin cabashooyin kala duwan sida: ”Ilmahaygu waa ii baahan yahay”, ”shuruudahani xaq ma aha” iyo kuwo kale oo badan. Si kastaba ha ahaatee waxaa dadka ka muuqdey shucuur wadaninimo. Hawada ayaa ahayd mid qabow, waxaa dhacaysey dabeyl aad ah, waxaa daàayey roob. Balse dadweynuhu waxaa ay u adkeysteen cimiladaas aan kor ku sheegnay iyagoo mudaaharaadkii kusoo gabagabeeyey wakhtigii loogu talo galay. Waxaa goobta mudaaharaadka joogey dhamaan warbaahinta kala duwan ee ka howl gala dalka. Ka dib kolkii mudaaharaadku dhamaaday ayaa waxaa dadweynuhu bilaabeen iney gudaha u galaan baarlamaanka si ay u dhegeystaan dooda xisbiyadu ka yeelanayeen arimaha ajaaniibta. Dadka badankood waxaa ka muuqdey daal iyo safar dheer oo qaarkood soo galeen. Waxaan jirin wax fursad ah oo dadku cunto ku doontaan maadaama howluhu ay si xowli ah ku socdeen. Soomaalida ayaa aad u soo buuxisey qaybta dhegeysiga ee baarlamaanka iyadoo si toos ah u daawanaayey dooda baarlamaanka. Dooda baarlamaanka ayaa waxaa ay bilaabatay kowdii iyo barka duhurnimo. Doodii baarlamaanka Waxaa laga doodaayey barnaamij balaaran oo ku saabsan arimaha ajaaniibta, kaas oo xisbiyada maamulka Iswiidhan haya iyo xisbiga cagaaran ”miljöpartiet”ay ku heshiiyeen. Qorshahan ku wajahan dadka soo galootiga ahi waxaa uu taabanayaa meelo badan, sida qofka doonaya inuu Iswiidhan shaqo u yimaado, dadka sharciyada loo diidey ee wadanka ku dhex dhuunta, caruurta aan waalidku la socon ee Iswiidhan yimaada, isu keenida qaraabada kala maqan iyo kuwo kale oo badan. Dowlada iyo xisbiga cagaarani waxaa ay heshiiskaan u galeen si loo koobo saameynta uu xisbiga cunsurigu ku yeelan karo arimaha dadka soo galootiga ah. Waxaa kale oo laga doodaayey mooshino ama qorshooyin kale oo xisbiyadu si gaar ah u soo bandhigeen. Dhamaan xisbiyada baarlamaanka kolkii laga reebo xisbiga cunsuriga waxaa ay carabka ku celceliyeen muhiimada ay leedahay in goàan laga gaaro arinta ku saabsan sidii loo middeyn lahaa qoysaska soomaaliyeed ee kala maqan. Doodii ugu kululayd waxaa soo jeedisey gabadha u hadleysey xisbiga dhinaca bidix ( vänster partiet). Gabadhaas oo la yiraahdo Christina Höj Larsen ayaa waxaa ay tusaale u soo qaadatay hooyo soomaaliyeed oo degan magaalada falköping ee koonfurta Iswiidhan. Christina iyadoo arinkaas ka duuleysa waxaa ay tiri: ” waxaa aan saakay halkaan baarlamaanka gudihiisa ah kula kulmay hooyo soomaaliyeed oo la yiraahdo Faadumo oo ay ka maqan yihiin catuurteedii oo aad u yar-yar. Faadumo waxaa ay rabtaa iney iswiidhan ku noolaato, iney luqada barato, iney shaqaysato, iney ka qaybqaadato horumarinta Sweden. Balse waxyaalahaas oo dhan ma sameyn karto, maxaa yeelay faadumo waa niyad xun tahay, waa fekertaa, waana wel-welsan tahay. Faadumo reerkeedii ayaa ka maqan mana fahmi karto sababta iyadana loo qaabilay reerkeedii iyo ilmaheediina loogu diidey. Faadumo waxaa ay hadda fadhisaa qaybta dhegeystayaasha ee baarlamaanka. Faadumo waxaa ay xaq inoogu leedahay jawaab. Haddaba waa in aaney maanta dhaafin, waa in aynu faadumo jawaab siinaa. Faadumo ma sugi karto intaan in ka badan”. Waxaa kale oo tusaalooyinkaas kuwo la mid ah soo jeediyey dhamaan xisbiyada oo dhan. Xisbi walbaa kolka uu hadlaayona waxaa uu eegaayey boqolaalka qof ee soomaaliyeed oo baarlamaanka soo buuxiyey. Arimaha soomaalida waxaa quseeyey laba qorshe oo isu dhow. Mid waxaa uu ahaa qorshaha ama mooshinka ay soo jeedisey gabar ka socota xisbiga deegaanka oo la yiraa Maria Ferm. Gabadhaas mooshinkeeda waxaa ay soo bandhigtay ka hor intii aaney dowlada iyo xisbiga cagaarani gaarin wax heshiis ah. Waxaana uu taabanaayey meelo badan, sida arimaha qaraabada, dadka raba iney iswiidhan shaqo usoo doontaan, dadka la dhoofinaayo iyo kuwo kale oo badan. Mooshinkaan markii uu xisbiga cagaarani soo bandhigay ma aaney jirin wax heshiis ah oo dowladu la gashay xisbiga. Ka dib aakhirkii bishii November 2010-ka ayaa waxaa bilaamay wadahadal dheer oo xisbiga deegaanka iyo xisbiyada dowladu wada galeen. Wadahadalkaas waxaa ka soo baxay heshiis guud oo xisbiga cagaaran iyo dowladu wada gaareen. Haddaba waxaa muhiim ah inaan fahamno arinkan soo socda: Mooshinkii ka horeeyey heshiiska guud ee ay Maria ferm soo bandhigtay ee ka hadlaayey in soomaalida loo fududeeyo iney qaraabadooda keensadaan waxaa lagu daray qorshaha weyn ee xisbiga cagaaran iyo kuwa dowladu ku heshiiyeen. Qodobo badan oo ku jirey mooshinka hore waxaa loo soo raray oo lagu daray heshiiska balaaran oo xisbiga cagaaran iyo dowladu ku heshiiyeen. Tusaale ahaan fikirka ah in dadka aan aqoonsiga haysan oo soomaalidu ka mid tahay laga qaado DNA waxaa uu asalkiisii ka yimid qorshihii hore ee xisbiga deegaanku soo bandhigay heshiiska guud ka hor. Sidaas darteed waaxda arimaha bulshada ee baarlamaanka ay soo jeedisey in mooshinkii hore ee xisbiga deegaanka ( waa mooshinkii ka horeeyey heshiiska guud) la diido. Sababtuna waxaa weeyaan qodobadii ku jirey mooshinka/qorshaha hore waxaa badankood loo soo raray oo lagu daray heshiiska balaaran ee arimaha soo galootiga ee ay dowlada iyo xisbiga cagaarani wada gaareen. Sidaas darteed waxaa ay waaxda arimaha bulshadu soo jeedisey in baarlamaanku diido mooshinkii hore ee Maria ferm soo jeedisey Balse la aqbalo qorshaha balaaran ee arimaha ajnebiga ee dowlada iyo xisbiga cagaarani wada gaareen. Haddaba 4-ta bisha may doodii dheerayd ka dib waxaa barlamaanku yeelay codsigii waaxda arimaha bulshada ee ahaa in la diido qorshihii hore. Balse waxaa la filayaa in baarlamaanku aqbalo qorshaha guud ee arimaha ajnebiga. Qorshahaas waxaa ku jira in dadka aan aqoonsiga haysan laga qaado DNA si ay ula midoobaan qaraabadooda. Qorshahan ansixintiisu wax dhib ah kama taagna maxaa yeelay waxaa uu haystaa cod aqlabiyad ah. Marka nidaamka baarlamaaniga ah uun buu marayaa balse waa iska cadahay in la aqbalayo. Dooduna kama taagna in la aqbalo iyo in kale balse waxaa ay ka taagan tahay qaabka qorshahaas loo dhaqan gelin lahaa iyo sidii loo kala hormarin lahaa. Dowladu waxaa ay haysataa iney dhamaan waxii lagu heshiiyey ay dhaqan geliso ilaa 2013-ka. Sidii ay qorshayaasha u kala hormarin lahayd waxaa xor u ah dowlada. Waxaa kaloo ah arin iska caadi ah in dowladu samayso baaritaano kala duwan inta aaney qorshayaashaas dhaqan gelin. Baaritaanadaasuna waxaa ay qaataan wakhti. Waxyaalaha soomaalida iyo xisbiyada badankood ku doodayaan waxaa weeyaan in arinka qoysaska soomaalida aan lala sugin wakhti dheer ee lagu daro qodobada ugu horeeya ee dowladu dhaqan gelineyso, maxaa yeelay meesha waxaa ku jira caruur yar-yar oo u baahan iney markale la midoobaan waalidkood. Dowladuna waxaa ay leedahay ”yes” arinka ku saabsan waalidka iyo ilmaha oo midoobaa waa muhiim balse wax walbaa wakhti bey qaataan. Waan dadaaleynaa balse ma sheegi karo wakhtiga aan dhaqan gelin doono iyo qaabka aan u wajahi doono mideynta reeraha soomaaliyeed. DNA- waa xal ka mid ah xalalka aan ka fekereyno ayaa dowladu leedahay. Waxaa kaloo ninka la yiraahdo Fredrik Federley oo xisbiga centerka la yiraahdo ka mid ah uu sheegay in dowladu sugeyso goàan ka imaan doonaa maxkamada arimaha ajaaniibta. Goàankaas waxaa uu noqon doonaa buu yiri mid la raaco oo xal u noqon kara arimaha qoysaska soomaalliyeed. Maxkamadu waxaa ay haysaa laba ” case” ama dacwo oo qoysaska soomaaliyeed ku saabsan. Labadaas dacwo ayaa goàan laga gaari doonaa dhowaan ayuu yiri. Waxaa uu yiri goàankaas waxaa uu soo bixi karaa hal usbuuc, laba usbuuc, ama saddex usbuuc gudahood. Marka xal waa heleynaa ayuu yiri Fredredrik Federley. Guntii iyo gebagabadii Mudaaharaadkii iyo dhaq-dhaqaaqii ay soomaalidu sameeyeen bisha may 4-teeda 2011-ka waxaa ay ahaayeen kuwo guul ku dhamaaday. Maxaa yeelay dowlada iyo xisbiyada mucaaradkuba waxaa ay yaqiinsadeen in arinka middeynta qoysaska soomaalidu uu yahay mid aad muhiim u ah. Isla markaasna ay lagama maarmaan tahay in xal loo helo. Xal u raadinta qoysaska soomaalida halkeedii ayey kas ii socotaa, waxaana aynu leenahay laba rajo.
Isku soo duuboo rajadii in xal loo helo middaynta qoysaska soomaaliyeed waxaan qabaa iney ka dhowdahay halkii ay joogtey intii ka horeysey 4-tii bisha may. Dadaalka, ololaha iyo howsha aynu wadno ee ah in aan dowlada Iswiidhan iyo hay àdeheeda ku wacyi gelino muhiimada ay leedahay in la isu keeno ehelada kala maqan waa inaan halkeeda ka wadnaa. Qofkii joornaal u bandhigi kara arinkiisa, qofkii maqaalo ku qori kara jaraa ìdka, qofkii ururada Iswiidhan iyo kuwa caalamiga la xiriiri kara. Dhamaanteen waa inaan wadnaa howshan oo aynaan ka seexan ilaa inta aan arkeyno qoysas soomaaliyeed oo la isu ogolaaday. Halku dhigeenu waa: Ilaahay idankiis guushu waa dhowdahay ee aan dadaalka laba jibaaro. Waana inaan ogaanaa qof walba masuuliyad ayaa arinkaan ka saaran. Kan shalay Iswiidhan yimid iyo kan labaatan sano deganaa Iswiidhan. Yaan loo kala harin: GACMO WADAJIR BEY WAX KU GOOYAAN Mahadsanidin Waxaa diyaariyey: C/risaq Maxamed Xuseen Eskilstuna, Sweden
Waxaan maqaalkaan ku lafaguri doonaa doodii baarlamaanka Iswiidhan uu 4-ta bisha may, 2011-ka ka yeeshay arimaha dadka ajaaniibta ah iyo weliba saameynta uu yeeshay mudaaharaadkii ay soomaalidu ka sameeyeen banaanka baarlamaanka. Waxaan kaloo halkaan aan ku sharaxi doonaa waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee ay xisbiyadu ka yiraahdeen arinka middaynta qoysaska soomaaliyeed ee kala maqan.
runti waxe cadenesa jimcale in ad dadaal dher ugashey sidi ad umada somaliyed uga haqabtiri lahed wax esan xata hade waxan qof sweden jogo usan ugan karin ila qof arimahan kawarhayo moye runti ad ayan kugu mahadcelinaya halkane dadalka kasi wad aniga sweden visa igama xaresno sas e tahayneh waxa ad aga xumahay dhibatada umada somaliyed ka hesato arimahas sida ad shegtey shaley e barafka iyo qabowga e latagnayen marka markale ayan ku mahadcelinaya
asc waan idin salamay dhamaan umadda somaliyeed walaal jimacale waxad hore u so qortay in ladiday mideyntii reerha somaliyeed hada maax is badalay oo aad maqshay warkaan hada rajada nagalinay ee abdirizak so qoray iyo midkii aad so qortay waa is qilafsanyihin ee bal no shega sida waxa u jiraan
Asc, walaal isma qilaafsana faalada uu soo qoray Abdirisak iyo warbixintii aan soo qornay. Abdirisak waxa uu sameeyay in uu faahfaahin dheeraad ah naga siiyo sawirka guud ee xaalada sida ay tahay.
Anigu waxaan soo qoray sidii wax u dheceen oo keliya iyo waxyaabihii aan ka xaqiijiyay mudanayaasha kala duwan ee ka tirsan baarlamaanka. Shalay waa sax in baarlamaanka Sweden uu diiday mooshinadii ku saabsanaa arimaha socdaalka oo ay ku jiraan kuwa soomaalida balse taas macnaheeda ma ahan in Soomaalida shuruud cusub lagu xiray ama albaabada la xiray ee wadooyin kale ayaa jira sida uu faahfaahiyay cabrisaak.
haye hadane warkaas ayaa keentay jimcaale adiga waa ka shakiye dadka ayaa waaleeysaa adiga waa na wareerisay waxaa rabtid ayaa iska soo qoree adiga qof ku aaminaayo ma jirto bye
Walaal Xaliima mowduucaan aniga ma qorin, waa fikirka iyo faalada uu qabo Abdirisak oo ka mid ah dadkii shalay soo abaabulay mudaharaadka. Runtiina isku meel ayaan wax u wadnaa. Anigu ma doonayo in aan been idinku maaweeliyo, sidii shalay warbixintu u dhacday waan idin soo qoray in sababta baarlamaanku u diiday mooshinada ay ahayd heshiiskii dowladana waan soo qoray.
Marka isku dayaya in aad fahantaan warbixinada oo aad dadaalkiina sii wadaan.
waad mahad mahadsantahay jimacale walaal waan niyad jabnay ilahay ayaa waax walaba ku xiranyihin wixiii ilahay qadaro cidna nagama celin karo
sxb kiinya ito itobiya ayey dadka ku dhibtoodeen marka ha iska laabtaan ee dadka rajo ha galinin dowlad sweden go.aan ayey ka gaartay arimaha somalida weena diiday in dad la keen aniga ayaa tvga ka dhageeystay sxb dadka ha wareerinin
jimcale adiga mooryaan ayaa ahaa jirtay ayaan u maleynaa mese cabtooy ayaa tahay waxaa rabtid ayaa ku hadleeysaa mese luqada ma taqaanid
lol walaashay inta aad sheegtay midna ma ihi. balse waxaan la yaabanahay Soomaalida halkee warku idinka maray? ma aqrisay warbixintaan waxa ku qorin iyo warbixinadii aan soo qornay shalay? ma ii sheegi kartaa farqiga u dhexeea? Ma waxaad dooneysaa in aan idin soo qoro warbixin idinka farxisa oo keliya mise mid idinka nixisa? mise waxaad dooneysaa xaqiiqada?
Jawaabta adiga ayaa garaneysid. Mida ugu dambeysa fadlan eega qofka qoray mowduuca, isaga ayaa masuul ka ah jawaabta. Aniga ma qorin mowduucaan markale ayaan ku celinayaa.
Wixii suaalo ah ee ku saabsan mowduucaan waxaa idinkaga jawaabi doona Cabdirisak Maxamed Xuseen.
runta bis lee sheeg
qalad diid says:
asc dhamantiin walalayaal somaliyeey yaa na habaaray balfiiriya gabadhaan leyla waxay soo qortay war hadii aanan aqoon lahayn war hadii aannan duqaad lahayn war hadii aanan ismaqleyn war hadii xitaa anan gaadiidka markaan la sococono telka hos ugu hadleyn oo waliba teenii noogu xishoodka badneyd ay tahay leyla maxaan kula yabaynaa swden haday na diido bal eega gabadhaan ninkaan web kan furtay muxuu u dhibay hadii aysan doonayn maxay u soo gashay yaase ka mudan cay walalyalow ha la is xurmeyo yaan la noqon sida leyla oo kale
asc abdirisaak iyo jimcaale iyo inta isu xilqaaantay waajibka saaran ee ah soomali nimo waad ku mahadsantihiin 100% intii wax garad ah
fadlan dadka caaytamaayo waxbo hoow arkinina waa dad aan fikir badneeyn hadaaan runta kasheego
marka m,arkale waad ku mahadsantihiiin si dhab ah ayaana u fahmay tii shalay iyo tan maanta sxbyaaaaaaaaal waadana ku mahadsantihiin markale waaa inoo dadaaaal iyo allah oo arinteeyna fududeeya meelkasta weey ka cakirantaye insha,allah
plz and plz mr abdi risaak iyo mr jimcaaale dadka caaytamaaaayo ha usoo jawaabina hana u joogsanina danta goood iyo tan gaarka ah ayaa isga daran wbt
asc dhamaan umada soomaliyeed iyo inte ka shaqeysay dadalka badan waxaa leeyehey samraa sedkis hela marka waa löa dooga yaa la dacaroon jimcaaale iyo inte ka shaqeynasaa dad guud waad mahadsantiihiin markale ogaade ilaahey waxba nooma diidin go,aankiiilaahey meel ayuu yaala waan la heer insha alllaah wax yer ayaa harey
ok waad mahadsantahay jimcaale iiga raali noqo
Waan kaa aqbalay walaal. Runtiina waxba taas uma arko waayo waan dareemi karaa xaaladiina balse aan isku dayno in aan ka doodno hadba mowduuca wararka iyo maqaalada ee yaanan ka doodin shaqsi.
walalayaalow damirla,aan waawaxa aan ugudhaygagsanahay dad dhulkood kaaso dhulalka aduunka ugu leeta in aan ilowno wadankeenina waxaa keenay markii ay iyagu ismaqleen isna xurmeeyeen waliba ayakoo gaalo ah ana kuna aan isku gafnay oo waliba aan wada xumaanay rag iyo dumarba ayaan u soo hanqaltaagnay waxay hagaajisten gaalo ismaqashay mida kale MAXAAN KEENI DAMCA IN UU BULSHADA WAX TARO MAXAAN U DIIRANAA TUSAALE DADKA WEBKAAN SAMEEYAY WAANAKA AFLAGADEYNEYNEE ma sidii hore ayaa ka wacneyd in aan dhago la,aano miyaa ka wacneydwaan is ognahay waan iska joognay wadanka lkn wax ka jira maanan ogeyn keenii wax yar joogay iyo keenii waxbadan joogayba walalayaal maan damiir yeelano waxaa na rogayna qabano kan bushada qaribaya maqabano wax madaraha doqonka ah oo waliba diidaya kan waxtarka ah SOMALI HADAANAHAY WAXNA MA QABSAN NAQAAN KEENII WAX QABAN LAHAANA NIYADA AYAAN KA JABINEYNAA war aan hubsano war cidahaan dhibaadada ku dhacaysa sida uu war sugan noo soo gaarsiin lahaa meelkasta oo wax laga soo duubayo ama war laga raadinayo dhaqaalo ayaa ku baxa sidoo kale Eega waxa uu nataray iyo waxa uu naga qaribay keebaa badan dad badan yaa markay ka soo kacaan hurdada booqda somaliska.com hadana comment ga aflagaado ku soo qora taasna waa cilad bulshdeena rogtay ee guud ahaan SOMALIYEEY xumee kii ahaa aan iska qabano by
Asc wan idin salamay akhiyarta ku xiran web kan walalayal wa ceb cayda dad wax alla wixi rajo ah idinla so socod siyo ma aha inad caysan fadlan jojiya jimcale adna wad mahad san tahay dul qad muji saxafi ba tahaye wax badan wad la kulmi waxa ino rajeyna akhbar wanagsan insha allah
qalad diid afkaada caana lagu qabay sidaas ayaa wanaagsan in aan laga daba caaytamin quftii qaloocan marka inta maslaxada umada kashaqeynesana allah ayaa u abaal marin doona lkn anaga hadaan soomlai nahay danteeyna manaqaaan qufkii wax natari lahaaana gacmaha ayaa kaqabaneeynaaa soow ceeb maahan taa fadlan dadka caaytamaayo allah ha u towbad keenaan dambi ayeey galeen jimcaale adne iska cafi bro wale waxaa moodaa inaan wax la fahmin xitaaa hadaaan wadankii kasoo dhaqaaqnay oonaan dhibka laqabsan dadka is maqlay anaann ka maseeyrin oo xaalka jog jog meeshaadiii joog yahay lkn somaaaliweyn alle ayaa u maqan insha,alllah wax managa halaabi doonaann
Salan sare dhaman waxan raba inan is fahan sina wanaga somalidu ad bey u dag dagta hadi ad maqashan rajo waxad u hambalyeysan howl wadenada wabka rajo xumo hadi ad maqashana wan caytana qarken sida an ka arkayay leylo mawaxan rabna wixi rajo kaduwan in lagu so qorin webka xal ku ma aha sida rajo iyo rajo la’anba walaso qoraya e sida leylo yan la’iska hadlin mahad sanidin
muhaa ali says:
a s m walalayal dhaman tina wa salaman tihn mida kale waxa ceb ah in la is cayo balse wax wa laisku shegi karaa mida kale dad ka caytamayo maha in la qad qado warkoda mana ah inlo jawababo marka man kab odhan cagta ka hos by all
ina libaax sanka taabte says:
asc all salan kadib waan akhriyay warbixinta waxaan kaloo aqriyay tii shalay ee go aankii barlamanka marka suaasha aan is weydiiyaay ayaa ah dadka dhaliilaha soo jeediyay ma warbixinta ayaysan aqrin mise waa dad uun raba dood iyo wax xun sheeg ? walalayaal waa laga fiicanyahy in wax la iska ssheego meeshan waa in fikrad la isku dhaafsadaa ee mahan in war aan habooneeyn la isku dhaafsado waadna koleeba wali fursado badan ayaa banan barlamanku haduu diiday mahan mowshinkii mahan in aan dadba la keeneynin lkn in shaa alaah go aan kale ayaa soo baxaaya marka bal ha la is dajiyo qolada webkana waxaan kula dar daarmayaa in aad didaashaan wixii jira soo gudbiya wixii aan jirina ha soo gudbinina waadna mahadsantihiin all asxaabta somaliska.com
mahad naq says:
May 5, 2011 at 20:15
walaal jimcaale aad iyo aad ayaa umahad san tahay macal c.risaaq hawshaanoo haysaan waaa hawl adag alaha abaalka iniga siiyo walaal cayda ka raali ahaada kun jeer walaal waad mahad san tihiin
Waad asalaaman tihiin dhamaan akhristayaasha Website-ka
Hoyga somaliska.com iyo dhalinyarada ka shaqaysaaba waxaa ay run ahaantii dadaal dheeraad ah iyo wakhtiba ay geliyaan sidii dadweynaha soomaaliyeed looga haqab tiri lahaa waxyaalaha ka dhaca dalka sweden gaar ahaan arimaha ku saabsan soomaalida. aad bey ugu mahadsan yihiin. Warkii hore ee uu qoray jimcaale iyo faaladaan anigu aan qoray ma aha kuwa iskhilaafsan. Balse warkii hore wuu gaabnaa waxaana uu ka hadlaayey oo keli ah mooshinkii xisbiga deegaanku soo jeediyeen heshiiska guud ka hor. Mooshinkaas oo sida faalada ku qoranba waaxda arimaha bulshadu soo jeediyeen in la diido. maadaama qaybo badan oo ka mid ah lagu soo daray heshiiska guud ee la gaaray. Marka qofkii si wanaagsan u akhriya faalada uu arki kara in aaney jirin wax isburinaaya. faaladuna waa faahfaahsan tahay. Howlwadeenada somaliska.com wax dan ah oo ugu jirtaa ma jiraan iney dadka war been ah ku wareeriyaan balse waxaa ay ku dadaalaan iney war cusub oo degdeg ah siiyaan dadweynaha. Shalay qofkii soogalay page-ka waxaa uu si live ah oo maqal ah ugala socon karay mudaaharaadkii stockholm. ma jiro homepage kale oo soomaali ah oo juhdiga intaas le.eg geliya arimaha ku saabsan soomaalida sweden. Marka akhristayaasha eedeynta soo jeedinaaya waxaa wanaagsan iney bal marka hore si fiican wax u hubiyaan. Dhaliishu waa fiican tahay hadii ay tahay mid miisaaman oo caddeynku fadhida balse hadii ay tahay eedeyn la iska tuuro ma fiicna. waxaan qabaa dhalinyarada howsha inoo haysa inaan dhiiri gelino. Waxii qaldamana si cilmiyeysan oo miisaaman aan ugu sheegno.
C/risaq M xuseen
ASc jimcaale iyo asxaabta kula wada waad mahadsan tihiin waa ina 100 mar lidiin mahad celiya wax kaasta aad soo qortaan waad ku mahadsan tihiin dadka edeysanayo jimcaale waa iney si fiican uu aqristan labada qoral wey isleyihiin hadana waxaan ku dari lahay figradeyda oo ah qofka wariyaha ama jornalis lama edeysto ile waxaay soo qoraan waa wexeey maqlaan ama arkaan bena waye in lagu dhaho ma ficno lakiin dadka qarkod ixtiraan la,aan wayaay .ee qofki rabo in uu wax fahanyo ee ina si dagaan wax uu aqristo waxaa ka cabsada sida uu caydameysan ina xata aqbar helin ile dadan abal leheyn laguma dali karo aad dhagolo noqodaan markaas ayaa daremeysan dadki idiin dadaali jiray ille somali waa yar tahay wax abal leh ee alle ha idiin tosiyo hadan qaldanahay igana rali noqda
runti aniga ma qabo qof dumar ah war u mesha kuso qorey in lo qabto wayo dumarka wa carur u kale marka aqi jimcale somali wad garan karta xil ama danteda laga shaqeyo ine wax sahlan ahen waxan ka codsanaya in adan ubixin ja ifada ayada ah aqi waxan dhihi laha dadka walaalaha ah e somaliyed inteda wax garaneso inesan wax sahlan ahen sharci ansixintisa marka runti qofki wax fahmayo quralki shaley iyo kan wax e ku kala duwan yihin malahan only bananbixi iyo doodi iyo diidmadi aya hal ciwan un laga dhigay iyo rajoyinka hada somalida ufurnankarto sida an kawarheno galo ama wadamada rer galbedka dadka marna niyada kama jabiyan wada un aye tusan marka umada somaliyeda waxan uran laha dadka shaqada qaliga ah umada u hayo inesan niyada kajabin
asc isku daya in aad sifiican wax u aqrisaan marka hore kadibna ka dhiibo fekradaada aflagadadana wey reeban tahay waxaan leyahay walaal leyla isku xishoo
DANTIIS MOOG MARA DUUG AH HORTEEDUU DHAMAADAA says:
SU’AAL JIMCAALE KU SOCOTA<
SXB Jimcaale waxba wax baa dhaamee arin dhowr qof kusoo weydiiyeen aan ana hada ku weydiinayo ayaa waxay tahay halkaan wixii loo sii fadhiyaa waa danamoog ee sxb qaali ahoow Jimcaale arinta 5 (shanta) sano ee wadanka laga maqnaan karo mooshinkeedii Maarso ayuu ahaa maxaa iyada ka haysaa??? hadii aan meelo kale ka aqrisan karno noo sheeg .
waad mahadsan tahay in badan sxb
Bahda somaliska aad ayaad u mahadsantihiin marka hore marka xiga umada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay u mahad naqa ilmihiina haduu dhul gaalo ilaahay idiinkaga badbaadinaayo oo culays la idinka saaray Waa alxamdu LILLAAHI qayrka meeshuu jirana ALLAA og waxaa macquul ah oo dhici kara ilmaha intaas aa u doodaysaan in barito la idinka qaato sida dhacdaba oo soomaali badan ilmahoodi looga qaatay kuwaas oo naga xanuun badan maanta marka sidaas darteed yaanan u murugoon go,aan baarlamaanka iswidhan uu gaaray ee ALLAHI na abuurtay aan ku shukrino qayrkana ALLAHA na waafajiyo waana mahad san tihiin dhamaantiin.
Kkkk hhh kkk gggg lol walahy wan xanaqsana waxa se iga yabiyey dadkan jimcale dabada qabsday jimcale ma barlamankiba intuu dadali karay wadadalay lkn anigu waxan haya talo wllyal manty jabkan wa midlaynagu talagay lkn aduun wa isbadalaya waxan maqly nin udhashy germany malin dhawayd waxu dhahy viso aya somali ka sugayey 7 bilod xilagy dowlad lahayen manty tibayna haysata sxb wali anigu waxan joga kampla waxan adaya alshabab iyo jìhadka idinku fadlan kalaya
Waa mahadsan tahay crisaaq walaal sida aad u faahfaahisey koley ILAAH ayaa garan waqtiguu xalka iman doono qeyr beyse ku dhamaan doontaa 2013da ama asbuuc ka dib intaba waa macquul. Dhanka kale Soomaalida waxaan uga yaabey waa dhagax waxba ma fahmaan qoraalka sidaan loo faahfaahiyey qofkii fahmi waayo sidee wax loogu sheegaa waa suaale? asxaan ha falin shari kuuma timaadaan maqli jirey asxaankii warka la idinkugu soo tabinaayey miyaa idiinkaga darey? calaakuli xaal jimcaale yaan waxba loo gefin da,daal ayaa la idinka rabaa qofwalba xil ayaa saaran ha ogaado WABILAAHI TOWFIIQ
Bacdal salaan marka hore aad ayaan kaaga raaligalinayaa jimcale qaladka iyo aflagaadada kaaga imaaneysa inta maangaabka ah ee aan iskuluuqada iyo iskuwadanka nahay kuwaasoo aan filayo inay yihiin kuwii qeyb weyn kaqaatay dhibka wadanka kajira oo aanu banaanada qurbaha ladaadsan nahay. Sida mooryaanimada aay kadhawaajisay gabadhaas laylo qoratay inladhaho waliba aan jeclahay in qof waxgaranaya ama wadaninimo kujirto inuusan afkiisa kasoobaxdeen kalmadas ileyn ayagaan ugasoo cararnay wadankiiye. Tan xigta aad ayuu umahadsan yahay c/risaq walalken sida wanagsan oo uu inoogu iftiinshay inaanan kaquusan waxii aan mudo sugeynay. Xaqiiqda anigu jimcale waxaan soobooqdaa webkaan maalintii 4 ilaa 5 jeer anigoo isleh waxcusub malasoo xareeyey waxaana maanta kaga ogaal badanahay xaalada imigrationka kuwo badan oo somali ah oo kunool sweden dhexdeeda anoo joga kenya narobi. Thnx markale aqii hana kadaalin howshaada wanagsan oo aad vulantary nimada noogu haysid. Waxaa kugufilan raali galinta sxbadayda badan ee waxfahma sida QALAD DIID.MOHAA.BABA ALI.
QOFKA LA BAXEY AQOONA MAGACA AH WAXAAN U SHEEGAYAA ADIGA LAFTIRKAAGA HA NA JAAIFEYNIN DUMARKA MA AHA CARUUR EE WAX ISKULA HAR ADIGAABA CAQLI NUS CAMAL U HADLAAYEE QOF WAX WAANINAAYANA WAAD ISKA DHIGEYSAA ISI SAX ADIGA
May 6, 2011 at 05:06
K.k.k.k.k.k.?qosolbadan kadib waxan layabanahay dadka kuminitiga ah e fikradaha soqnorayo waxa arkay 32 fikradot o halkamidah esan soqorin qoralka kuhabon mowduca e mowduci lagukala wargurilaha loo weceyay jimcalow rali ahaw jimcalow waxatahay cabtoy
jimcalow walalow karilinoqo iyo jimcalow saaaanatahay iyo gabdhaha warya afkaga balaq hakusinin iyo wadankan galo waye iwm manakuhabono qof weyn inu mawduci lagasugayay mahe kiniyadisa kuso dhoco uska dhaho an usodadego dulucda maqalkeyga lasoco qebta 3xaa
gabo gabadi iyo gunanutki waxan rabaa in an dadweynaha usharaxo macnaha (FAALO)falo waxa dhibikara qofka waxa laga falonayo asaga kaso askumen mahane kaliya meshan waxa walalkey c.rizaq kamuqda dhiragalin ee hadalka waki here jimale soqoray e dadala a.s.c.
May 6, 2011 at 06:37
Jimcaale howlaa kuu taalo sxbkey ileen dad xitaa afsoomaaligu uu dhibaayo ayaad rabtaa inaad caawiso oo aad waxna fahamsiiso, runtii maqaalka iyo cabdirisaaq iyo warkaagii waa isleeyihiin dadkaana uma baran faalo iney aqristaan warkooban ayey jecelyiin. Adiga warkaagii wuxuu ahaa inaad go,aankii uun aad sheegtey cabdirisaaqna wuu kugu raacay wuxuuna raaciyey fursadaha marka dadku waxey moodaan fursadaha in ay ka mid ahaayeen waxa meesha looga hadlay, aad ayaan u fahmay kheyr ayaan rajayneynaa ilaah idinkiis. Adiga sxb iska dulqaado ogoowna dadku iney soomaali yihiin, shaqo muhiim ah baad heysaa deeq iyo darajana ugama rabtid ayaga geesi baad tahay hadaadba u bareertey inaad caawiso soomaali diidan. Kuwaan alshabaab aa ka raayey saa waa bireeyaa kuu qabtee.
May 6, 2011 at 07:41
asc dhamantiin , qof kasta oo si degan u akhriya maqaalkan faafaahinta ah wuu fahmi karaa runtii,marka wax lagu wareero ma ahan ,taladuna waa mida alle ee aan daadalo oo kaliya,walalaheena inoo dadaalanaya aynu dhiiri galino insha aalah ,wabilaahi taqfiiq
May 6, 2011 at 08:03
ASc DHamaantina waad ku mahadsan tihiin qoralkina iyo figradihina waxaan kale ku xijina ninka isku shegayo aqoon ugu horeynti dumarka hadey caruur yihiin miyey dumar ku dhaliin ama kula dhalanin ama dhali donin sidas darteer ogaw hadana waxaan kalo ku xijina meeqo raga caydamaan kuwaas ayaa ka lido dumarka ayaa uu bahaan in caruur lagu shego waxaan kale kugu dari lahay marku qof qaldamo kuli lama wada edeysto taasna ogaw wixii qalada ah na ka rali noqo
Asc jimcaale walaalkey adiga oo mahadsan waxa aan qabaa suaal waxaan joogaa kenya xaaskayga ayaa sweden joogta oo ii doodaysay dood kadib diidmo ayaa la i siiyay lkn apeal waad qaadan kartaa ayaa la igu yiri marka maxaa talo ah masii wadaa mise faraha ayaan kala baxaa buufis oo dhan walaal mahadsanid
asc dhamaantina ahmed jihaadka ma walaalka muslima ina dishiid hada waad ku fane lakiin maaliinba ka shaleyne donta war dhig bini adiin waligisa ma hare alle ka cabso ee umadana ha dhuminin subxanalahi
Cabdalla rajada wali waa sideedii, marka anigu kuma lihi faraha kala bax. Sii wad appealkaaga iyo dacwadaada.
Suaalaha ku saabsan go,aankii 5 sano wadanka looga maqnaan karay runtii ma maqal meel lagu ansixiyay go,aan nuucaas ah oo waxay keliya ahayd talo ay soo jeediyeen gudi. Cidii war ka haysa waa ii soo diri karaan.
Waxaan aad u dhiirigelinayaa jimcaale iyo Abdirisak iyo akhyaarta kale sida ay ugu dadaalayaan in ay dadka warbixinta ka haqabtiraan, please bulshadana waxaan oranlahaa ku booriya hawsha ee ha galina, waan dareemi karaa qofku war uu ku farxi waayo hadduu arko waa booda lkn runtu waa lagama maarmaan. yaan laga quusan farajka alle inshalah khayr.
Magacaaga...ina Drs says:
Kkkk … Wlh wa wax lala yabo labo isla shaqeso oo war isku heyn faaladan danbe waxe lahed marki hore marka loma hadlo webka aniga leh waxa ka si daran jimcale oo leh war kama hayo falada c/risaq oh sorry talo wa tii rabi
Asc walaal sida aad wax u fahamtay qalbigaaga ku hayso dad badan ayaa raba oo daneynaya in labada dhinac ee hadalada jimcaale qoray iyo kuwa ku jira maqaalka cabdirisaaq teeda kale sida aan aniga u arkay iyo fahamka walaalo kale oo komenti ka sameeyayba wax farqi ah oo u dhaxeeyo majirto labada qoraal marka waxaan kaa codsanayaa inaad tixgelisid walaalaha doonaya qofkii rajo u haya inuu usoo qoro si ay ugu raaxeystaan midkalena waxa waaqica ah u sheego ileyn waa loo baahan yahay
asc/ walal waan idiinka mahad celinaynaa dadaalka aad ugasheyn soomaalida saxaafadu waxay ka mid tahay tignikada la adeeg sado waxaadna u hadlaysaan shacabkiina walal udulqaata fahan la aanta somalida haysata cabdirisaaq kun iyo kow jeer mahadsanid waxaad sharaxaad fiican naga siisay arimo badan sida aywax isu badali karaan xitaa manaan ogeyn go aan in maxkamada kasoo bixikaro lkn hada rajo fiican ayaad nagalisay jasaakalllaah kheyr
Magacaaga... ABDI YARE says:
Asc dhaman umada muslimiinta qasatan somalida waxan kale oo salamaya jimcaale sido kale walalayal af lagaado wa laga fiicanyahay aan kala faa,iidesano mida kale raja xumo ma jirto wadoyin badan ayaa furan hada dadka afrika wa ka so bilowdeen oo dad ka yimid ayaan is aragnay oo ogolasho la so siiyay lkn niyada ku haay in sweden sidii hore oo xaj iyo cimra camal loo iman jiray wa dhamatay ilaah xagiis yaan laga quusan mahadsanidiin
A.S.C dhamaan walaalah…….marka hore alle ayaa mahada iskale iyo nabigeni muxamed aha naxaris iyo nabadgalyo kor kisa ah ahate….somalida sweden ku nol qasatan kuwa ka maqan yihin familada sida caruurta iyo xasaska
awalan alle waxu qoray ayaa lahela maha in dowlada sweden waxa ino qaban karto kaliya
iskana dhafa cayda iyo iska hadalka waxa lo bahan yahay is kashi iyo samir dherad ah
waayo anaga ma haysano wadan nabad ka jirto ama waqti xadirkan lagu laban karo waan ogahay in ithobiyo iyo kenyo lagu nolan karin hadana danta ayaa mar waliba ka xogbadan inshaa allh waa la qeyra allan baryadisa lagama dalo hadey sweden qeer ino tahay waan doneyna in nalo keno dadkeni hadey shar notahayna aniga waxan qaba in eey waxba ino kenin maxa yelay sweden xijki ama janadi maha
aniga hada waxa iga maqan dhoor caruur ah wlhi ayaan ku dharte
waxa dhib ah uma arko diidmada sweden na diiday waayo waxa badan ayaan sweden ku arkay kaliya waxan ku ducesta inu wadankeni nabad alle inoga dhigo inshaa allh mana qasari dono
Dear jimcale and abdirizaq.
Warkii aad jimcale soo qortay wuxu ahaa NEWS sidii ay wax u dheceen.
faalladii abdirizaq waxay ahayd faahfaahin sidii ay wax u dheceen iyo waliba rajada la filayo mustaqbalka dhow.(waa sida aan aniga u fahmay).marka waxaan idin leeyahay thankyou so much and keep up the good job.
arrinta waa arrin wakhti keliya inaga xigo(matter of time).waxaan joogaa australia waana la socday shalay mudaaharaadkii aad live inoogu soo gudbiseen. THANKYOU SO MUCH AGAIN. good wisher.
war asxaabey ninkaan dadaalayo kaleexda waxi jiro ayuusooqoray mana idiinka farxin karo mana idinka naxin karo waa saxaafad kaliya been maarabtan in idiinla sheego jimcaal hoolboonoohayaa ee hanagudirina jimcalaa waad mahadasantahay hoosha halkaaga kasiiwad been lee naga ilaaali waxi dhabta ahlee sooqor jimcaale iyo inti lashaqeyso hool wacan
Asc sida aan ku qoray bilowga magacaygu waa Abdulkadir waxaan daganahay gobolka Norrbotten degmo layiraahdo Boden isbarasho ka dib waxaan u mahadcelinayaa jimcaale iyo cabdirisaaq labadaba waana loo baahan yahay xaqiiqada oo sidaas laysugu dheeho waanan fahmeynaa rajadu madhamaato qofka muslimka ahna lagama rabo inow quusto waana in ay soomaalida wadaan dadaalka iyo ololaha loogu jiro sidii looga mira dhalin lahaa arimahan soomaalida maanta saameyn ayey kuleeyihiin wadankan siyaasad ahaan iyo shacab ahaanba halkudhigeena waa sida uu qoraaga maqaalka sheegay gacmo wadajir bay waxku gooyaan iskaashi ayaa noo balan ah waad mahadsan tihiin
asc dhamaan asxaabta siiba jimcaale iyo abdirisaaq walaalayaal waxaan idin leeyahay dadaalkiina hagaabinina wax kasto aad la kulan taan mahadsanidin
Asc dhaman bahda DNA HADI AN MARAY JWBTEDANA OK LEY YIRI ARINTAN SAMEN MA IGU YELAN KARTA JIMCALE MAHADSANID
May 6, 2011 at 22:47
Muhanad runti waxan qaba hadi ad tahay somali in at laqabto dhibka somali waayo dadka odhan wexey diyar layihin dna marka umaleyn mayo in DNA ey kucawineyso somali is somali kaliya basabor aya laguweydiyay
asw jimcale war mihiima soomalida waxba haqa qorin waa ayo dadmaaha ee waa saxaro ama xaar, inta ay sweden ku mudaharaadayaan waa loodhaama ee dalkooda maydhistaan dad ilaahay imaanka kaqaaday weeyye dadka mudaharaadaya waana nolol raadis qoxoontina maaha waa varus swedena varuska way ka hortagtay, naagaha dhalmada badan ee somalida waa digaagado sxb dalkiina dhista fariintaa iga gaadhsii